သတ္တုထဲမှာတွင်းတူးဖို့ဘယ်လို? - Mibond စက်ပစ္စည်း
နေအိမ် / သတင်း / ဘလော့ / သတ္တုထဲမှာတွင်းတူးဖို့ဘယ်လို?
views:100 Author:ဆိုက်ကို Editor ကို အချိန် Publish: 2021-08-03 မူလ:ဆိုက်ကို
တူးဖော်ခြင်းသည်တူးဖော်ခြင်းကိုတူးဖော်ခြင်းနှင့်တူးဖော်ခြင်းကိုတူးဖော်ခြင်းကိုရည်ညွှန်းသည်။ အသုံးအများဆုံးတူးဖော်ရေးကိရိယာများသည်ခုံတန်းရှည်များကိုလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း,အသေးစားလေ့ကျင့်ခန်းစက်များ။ တစ် ဦး နှင့်အတူသတ္တုတူးဖော်ခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုလက်တွေ့လေ့ကျင့်ခန်းစက်တကယ်တော့သစ်သားတူးတာနဲ့ဆင်တူပေမယ့်နည်းပညာနဲ့စစ်ဆင်ရေးမှာသိသာထင်ရှားတဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုတွေရှိတယ်။ သတ္တုတူးဖော်ရန်လေ့ကျင့်ခန်းကိုအသုံးပြုသောအခါအခြေခံလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များကိုလိုက်နာရန်နှင့်အပူလွန်ကဲခြင်းကိုတားဆီးရန်နှေးကွေးသောလမ်းတူးခြင်းကဲ့သို့သောမှန်ကန်သောနည်းစနစ်ကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။
သတ္တုသည်အခြားမျက်နှာပြင်များထက် ပို. ခက်ခဲသောကြောင့်,အစွမ်းထက်လေ့ကျင့်ခန်း bitsနှင့်အထူးလေ့ကျင့်ခန်း bits သတ္တုတွင်းတူးရန်အသုံးပြုကြသည်။ ထို့အပြင်, သမားရိုးကျခရီးဆောင်ကြိုးမဲ့လျှပ်စစ်သုံးခြင်းသတ္တုထဲသို့တူးရန်အလားတူဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကွဲပြားခြားနားသောသတ္တုများသည်ကွဲပြားခြားနားသောခိုင်မာသောခိုင်မာသောအဆင့်များနှင့်ခက်ခဲသောသတ္တုများအပါအ0င်ကွဲပြားခြားနားသောခဲယဉ်းအဆင့်များရှိသည်။အနက်ရောင်လေ့ကျင့်ခန်း bitsယေဘုယျအားဖြင့်သတ္တုတူးဖော်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုကြသည်။ လေ့ကျင့်ခန်းအနည်းငယ်၏ပစ္စည်းသည်ယေဘုယျအားဖြင့်မြန်နှုန်းမြင့်သံမဏိဖြစ်သည်။ အထွေထွေသတ္တုပစ္စည်းများအတွက်တွင်းတူးရန် (Allot Steel, Allow သံမဏိသံမဏိ, သံမဏိသံမဏိ, သံမဏိ, သံမဏိ, ၏အလုပ်လုပ်နိယာမအကြမ်းခံပါဝါလေ့ကျင့်ခန်းElectromagnetic rotary သို့မဟုတ် Electromagnetic မှလွင့်မျောနေသောမော်တာ rotor သည်သေးငယ်သောစွမ်းရည်ရှိသောမော်တာကိုအသံလွှင့်ခြင်းနှင့်စစ်ဆင်ရေးကိုပြုလုပ်သည်။ လုပ်ငန်းသုံးကိရိယာသည်ဂီယာကိုမောင်းထုတ်ရန်ဂီယာကိုမောင်းနှင်ရန်ဂီယာကိုမောင်းနှင်ရန်ဂီယာကိုမောင်းနှင်ရန်ဂီယာကိုမောင်းနှင်ရန်မောင်းနှင်မှုယန္တရားမှမောင်းနှင်သည်။ လျှပ်စစ်လေ့ကျင့်ခန်းများကိုအမျိုးအစားသုံးမျိုးခွဲခြားနိုင်သည်။လက်လျှပ်စစ်လေ့ကျင့်ခန်း, သက်ရောက်မှုလေ့ကျင့်ခန်းနှင့်အသုံးဝင်သောသံတူ.
လူအများစုကထင်ကြသည်မြင့်မားသောစက်မှုလုပ်ငန်း - အတန်းလေ့ကျင့်ခန်း -bitsသို့မဟုတ်တူးဖော်စက်များကိုသတ္တုတွင်တွင်းတူးရန်တူးရန်အသုံးပြုသည်။ စင်စစ်အားဖြင့်သင်သည်အခြားလေ့ကျင့်ခန်းများများမှတစ်ဆင့်အခြားလေ့ကျင့်ခန်းများများမှတစ်ဆင့်အလုပ်ကိုဖြည့်စွက်နိုင်သည်Mini လက်လေ့ကျင့်ခန်း.
သမားရိုးကျလေ့ကျင့်ခန်းများသည်သတ္တုဖြင့် ဖြတ်. မဖြတ်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့်ခက်ခဲသောမျက်နှာပြင်များပေါ်တွင်တူးခြင်းသည်အထူးလေ့ကျင့်ခန်းလိုအပ်သည်Mini Twist Drills။ လှည့်ကွက်၏တူးမြောင်းသည်အမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိသည်။ ဖြောင့်သော Shanks နှင့် Taper Shanks ။ ယခင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေစဉ်အတွင်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေစဉ်အတွင်း clamp လုပ်ထားပြီးအဆုံးစွန်သောစက်ကိရိယာအစုံသို့မဟုတ် tailstock ၏ taper stool ကိုအပေါက်ပေါက်ပေါက်နေသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်လှည့်ကွက်များကိုမြန်နှုန်းမြင့်သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ဂဟေဆော်ရန်ခဲယဉ်းသောအလွိုင်းဓါးများသို့မဟုတ်သရဖူများနှင့်အတူလှည့်ပတ်လေ့ကျင့်ခန်းများသည်သံ,သေးငယ်တဲ့အစိုင်အခဲ hard alloy twist Drillsတူရိယာအစိတ်အပိုင်းများနှင့်ပုံနှိပ် circuit ဘုတ်အဖွဲ့များအတွက်အသုံးပြုကြသည်။
အမှတ်အသားအတွက်လိုအပ်သည့် tool ကိုတစ် ဦး လာကြတယ်။ ထိုးနှက်ခံရဖို့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းအပေါ်အပေါက်၏အနေအထားကိုပထမ ဦး ဆုံးရှာပါ။ ပစ္စည်းများကိုတင်းကျပ်စေရန်ပြားချပ်ချပ်နှာခေါင်းသို့မဟုတ်လက်ပွေများကိုသုံးပါ။ တူးရန်စတင်ရန်သင်သည်မှန်ကန်သောလေ့ကျင့်ခန်းကိုရွေးချယ်ရမည်။ တွင်းတွင်းအလယ်ဗဟိုတွင် drink bit ကိုဒေါင်လိုက် fix နှင့်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ရန်ပြင်ဆင်ပါ။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်တွင်း၏ဗဟိုချက်ကိုချိန်ညှိပြီးတူးဖော်ခြင်းကိုစတင်ရန်ခုံတန်းရှည်ကိုစတင်ပါ။
သတ္တုတွင်တူးဖော်သည့်စက်ကိုအသုံးပြုသောအခါ workpiece ကိုအမြဲတမ်းနေရာချထားရမည်။ ကွေးခြင်းမှကာကွယ်ရန်အတွက်တူညီသောအချင်းတူညီသောအချင်းတစ် ဦး ၏သစ်သားလှံတံကိုပြွန်ထဲထည့်ရန်လိုအပ်သည်။
အသေးစားလေ့ကျင့်ခန်းစက်များ လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခန်းစက် အစွမ်းထက်လေ့ကျင့်ခန်း bits အိတ်ဆောင်ကြိုးမဲ့လျှပ်စစ်လျှပ်စစ်လေ့ကျင့်ခန်း အကြမ်းခံပါဝါလေ့ကျင့်ခန်း လက်လျှပ်စစ်လေ့ကျင့်ခန်း အသုံးဝင်သောသံတူ Mini လက်လေ့ကျင့်ခန်း Mini Twist Drills သေးငယ်တဲ့အစိုင်အခဲ hard alloy twist Drills